Home News R/wasaaraha Itoobiya oo sheegay in Calanka wadankiisa la Bedeli Karaayo!!
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo qaar ka mid ah warbaahinta dalka la hadlay ayaa wuuu sheegay in calanka dartii aan loo baahneen iney rabshado iyo iska horimaadyo dalka uga dhacaan. Bilihi la soo dhaafay muwaadiniinta dalka Itoobiya waxay bannaan baxyada ay sameeynayeen u adeegsanayeen calamo kala duwan oo isugu jira kan dalka oo dhowr nooc ah.
Booliska dalka Itoobiyana waxay sheegeen iney jiraan dhaawacyo rabshadahaasi ay sababeen. Sabtida ayaa lagu wadaa iney jabhadda OLF in magaalada Addis Ababa si rasmi ah looga soo dhaweeyo. Dr Abi Axmed wuxuu sheegay calanku inuu yahay astaan uu dal ama xisbi siyaasadeed uu u adeegsado in lagu aqoonsado, cid walbana waxay xaq u leedahay iney aragtida siyaasadeed ee ay aminsan tahay ay si xor ah u soo bandhigto, xorriyaddaasina waxaa ka mid ah calanka. “Mareykankaba calankiisa wuxuu calankiisu beddelay ilaa iyo 13 jeer marka Itoobiyana haddii ay muwaaddiniintu dalka raalli ka noqdaan waa la beddeli karaa, waa ineynu ka fikirnaa oo keli sidi dalka aan horumar u gaarsiin laheen noolasha dadkana aan wax uga beddeli laheen, ma aha inaan ku mashquulno waxyaabo aan dalka wax ku soo kordhineyn oo weliba burbur u horseedi kara”. Ayuu yiri Abiy Ahmed.
Previous articleDowladda Mareykanka oo Walaac ka Muujisay Taageeridda Farmaajo iyo Mursal ee Mukhtaar Roobow in lagu badalo Shariif Xasan
Next articleCali Gacal Casir”arrin sax ah ma ahan, xildhibaano ma ahan waana dadka degaanka”